पुरानो तर समय सान्दर्भिक - सुनाखरी न्युज
पुरानो तर समय सान्दर्भिक
Posted on: December 23, 2020 - 11:26 am
प्रेम चौलागाई – सूर्य बहादुर थापाले राप्रपाबाट अलग भएर राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी बनाउने हुनु भयो । त्यस पछि विराटनगरमा एउटा भेला भयो। डा लोहनी पनि त्यो भेलामा जानु भएको थियो। डा. लोहनीले अर्जुन राई र मलाई बोलाएर भन्नु भो । नकाम गर्न लाग्नु भो । पार्टी अलग बनाउने कुरा गर्नु हुदैन भन्नु होस गएर तपाईहरुले ।
हामी थापा निवासमा गयौं । मैले भने धृतराष्ट्रको सभामा बसेपनि विदुरले सत्यको वाटो छोडेनन्। पुत्र मोहले राज्य सकिन्छ भनि रहे तर धृतराष्ट्रले विदुरको कुरा नसुन्दा महाभारत भयो। म हजुरसंगै बसौला तर विदुर बसाई जस्तै हो । मेरो समर्थन पाण्डवलाई भईरहनेछ भने। तिम्रो पाण्डव को हो ? मैले भने पाण्डव भनेको पार्टी एकता हो। पार्टी रहे हाम्रा पुस्ताका लागि हस्तिनापुर रहने छ। कार्यकर्ताको लागि राप्रपा हस्तिनापुर हो हजुर भने। त्यस बेला बसन्तमान अधिकारी पनि हुनु हुन्थ्यो। वहाँले कमल थापा लाई जसरी पनि ल्याउनै पर्छ। हजुर पछिको नेतृत्व दिने मान्छे वहाँ नै हो भन्नु भयो।
तर हाम्रा कुरा सुने पनि सूर्य बहादुर थापा टसमस हुनु भएन । मैले भने हजुर पार्टी फुटे इतिहास ले माफ गर्दैन यो काम नगरौं। तर वहाँले भनु भयो मेरो इतिहास मैले बनाउने हो इतिहासले मलाई बनाउने होईन । को आउँछन् को आउँदैनन् त्यो कुरा ठूलो होईन ठूलो कुरा चाही म के गर्दै छु चाही हो। धेरै साथीहरुले पार्टी एक बनाएरै अगाडि बढ़े राम्रो हुने भन्ने धारणा व्यक्त गरे पछि बुढाले राजनीतिमा उभिन सिक्नु पर्छ हल्लिन होईन भन्नु भो – – – – – – पछि पार्टी फुट्यो र राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी बन्यो त्यसको केन्द्रिय सदस्य म पनि थिए। यो कुरा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई काम लाग्छ कि केही कुराहरु भनेर लेखेको छु । लागे प्रयोग गर्नु वेश हुन्छ।